Dareemka Garaafka, Dharka, iyo Soo-saareyaasha Xadhigga & Shiinaha Graphite dareemay, Maro, iyo Warshad Xadhig
Polyacrylonitrile ku saleysan Fiber Fiber dareemay
Dareenka garaafku wuxuu u qaybsami karaa garaafka ku salaysan asfalt-ka, garaafka polyacrylonitrile (PAN-based) garaafka iyo garaafka ku saleysan viscose-ka ayaa la dareemay xulashada kala duwan ee dareenka asalka ah. Isticmaalka ugu muhiimsan ee garaafka la dareemay ayaa ah sida kuleylka kuleylka iyo qalabka kuleylka kuleylka ee foornada dhalaalaysa. Waxaa loo isticmaali karaa sida wax filter for daahirnimo sare reagent kiimikada kiimikada warshadaha kiimikada.
Xadhiga kaarboon / xadhig khaas ah oo kaarboon gaar ah oo loogu talagalay foornada sinjiga ee faakiyuumka
Badeecadani waxay ka kooban tahay 12K fiber fiber-ka iyada oo loo marayo habka gaarka ah. Waxay u adkeysaneysaa daxalka, heerkulka sare, waxay leedahay astaamaha xoogga sare, miisaanka fudud, ka-hortagga daxalka, iska caabinta kuleylka wanaagsan, isugeyn ballaarinta kuleylka yar, nolosha adeegga dheer, iyo ilaalinta deegaanka. Waxay leedahay dhexroor: 1mm / 2mm / 3mm / 5mm.
Mashiinka kaarboonka waa lagu miiqay oo lagu tolay saldhigga polyacrylonitrile (PAN) fiber carbon, kaas oo u qaybsan dharka kaarboon kuleylka ah, dharka kaarboonku kuleylka kuleylka kuleylka, iyo xoojinta iyo adkeynta dharka kaarboonka. Waxaa sidoo kale loo qaadan karaa inay tahay maaddada xoojinta kaarboonka / walxaha ka kooban kaarboon.
Xadhig Kaarboon Fiirsado
Xadhigga kaarboonku wuxuu ka samaysan yahay kaarboon-kaarboon-ku-saleysan polyacrylonitrile (PAN-CF), oo lagu farsameeyo nidaam dhar gaar ah, oo leh faa'iidooyinka xoogga sare, aan ku dhalaalin heerkulka sare, xasilloonida kuleylka wanaagsan, culeyska yar, u adkaysiga daxalka, waa lagama maarmaan sheyga loogu talagalay isku xidhka iyo tolida lakabka kaarboonku dareemay ee foornada faakiyuumka. Sababtoo ah anshax wanaagga xarigga kaarboon, waxaa loo isticmaali karaa inuu ahaado fiilada kuleylka ee kaarboonka
Dunta dunta kaarboonka
Dunta dunta ee kaarboon kaarboon ayaa loo isticmaali karaa inay tahay qalab xoojiya, sida naadiga golf-ka, usha kalluumeysiga, baarkinka badminton, iwm. Waxay leedahay astaamaha is-saliidaynta, xirashada iska caabinta, nuugista shoogga, waxay ku yeelan kartaa saameyn aad u fiican oo qoynaya gariirka, iyo gaaska electromagnetic hirarka. Gaaska aan firfircooneyn wuxuu leeyahay caabbinta kuleylka wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay heerkulka sare ee qalabka kuleylka kuleylka kuleylka ee heerkulka sare ee 2000-3000 ℃.